Uyilo lwesakhiwo kunye ne-AutoCAD software portal
Impendulo eKhawulezayo: Uyongeza njani ifanitshala kwiimodeli zeRevit?
Udidi: omnye 0
Ndiyongeza njani ifenitshala kwiRevit 2022? Kwi-Faka ithebhu, cofa ukulayisha i-Autodesk Family ukulayisha isikhangeli. Kwibhrawuza sebenzisa umthi wokukhangela uku...
Ziphi iiPropati zoMaleko kwi-AutoCAD Mac?
Ndiyivula njani iipropathi zomaleko kwi-AutoCAD? Cofa ekunene umzobo weCAD, yalathe kwi-CAD yokuzoba Into, uze ucofe iiPropati. Cofa i Layer thebhu. Khetha i...
Impendulo eKhawulezayo: Ithini ifom epheleleyo yeCOM kwiCAD CAM?
Yeyiphi kwezi zilandelayo eluhlobo olupheleleyo lweCAD? Uyilo oluncediswa yikhompyuter (CAD) kukusetyenziswa kweekhompyuter (okanye izitishi zokusebenza) ukunceda ekudaleni, ekuguquleni, ekuhlalutyeni, okanye…
Uzilungelelanisa njani izinto kwiDraftsight?
Uyilungelelanisa njani into? Lungelelanisa into nezinye izinto Bamba phantsi Shift , cofa izinto ofuna ukuzilungelelanisa, kwaye emva koko ucofe i...
Ndiyenza njani iSolidWorks yamva nje?
Ndiyijonga njani yamva nje kwi-Solidworks? Cofa amaqhosha otolo asekhohlo okanye asekunene. Imboniselo ihamba ngokwexabiso lonyuso elikhankanyiweyo kwizitshixo zotolo kwiZixhobo...
Umbuzo: Uyenza njani itafile yomgca kwi-Civil 3d?
Uyenza njani itafile yokulungelelanisa kwi-Civil 3d? Ukongeza iiTafile zoLungelelaniso Cofa i-Anotate tab Iileyibhile kunye nephaneli yeTafile Yongeza iTafile imenyu Ulungelelwaniso Yongeza umgca. Kwi...
Ngaba i-Internet Explorer 11 iyayixhasa iSVG?
Ngaba iSVG isebenza kwi-Internet Explorer? I-SVG (i-Scalable Vector Graphics) ixhaswa ngokusemthethweni zizo zonke iibhrawuza eziphambili zewebhu, kuquka i-Internet Explorer. Inkxaso ifikelela kwiindidi ezininzi…
Imele leliphi ilizwe iSTL?
Imele ntoni i-STL *? STL. I-STL yifomati yefayile yemveli kwi-stereolithography yesoftware yeCAD eyenziwe yi-3D Systems. I-STL ikwabizwa ngokuba yiMigangatho…
Uzibonisa njani iipropathi zobuninzi kwi-SOLIDWORKS?
Uzibonisa njani iipropathi ngobuninzi? Uyakwazi ukujonga iimpawu zobunzima obaliweyo.…Ukubonisa iimpawu zobunzima: Khetha izinto (amalungu okanye imizimba eyomeleleyo) eza kuvavanywa. … Cofa...
Ubuzile: Ngaba ungayingenisa ngaphandle iDXF kwiSolidworks?
Ngaba ungayiguqula i-DXF ibe yinxalenye ye-SOLIDWORKS? dxf). Khangela kwifayile, uze ucofe Vula. Imodeli iguqulwa kwangoko ibe yinxalenye yeSOLIDWORKS, okanye…
1 2 ... 7,795 Okulandelayo
Molo! Igama lam ndinguJohn. Ndiyinjineli kunye nomyili. Ndifuna ukwabelana ngamava am kunye neengongoma ezibalulekileyo ezifunekayo xa uqalisa naluphi na ulwakhiwo.
Ndazi njani ukuba ifayile yam yi-ANSI okanye i-UTF 8?
Ndiwuhlisa njani umzobo kwi-AutoCAD?
Ubuzile: Kutheni umkhombe uthetha imali?
Ndiphuma njani kwimowudi yokuHlelwa kweQela kwiRevit?
Ndisilanda njani isicwangciso kwi-AutoCAD?
Umbuzo wakho: Uwugcina njani umboniso kwiSolidworks?
Umbuzo wakho: Ingaba iingonyama zitya indle yomkhombe?
© 2022 Iprojekthi eyodwa